Taariikhda horumarinta baaskiilada korontada
Bogga ugu weyn blog Taariikhda horumarinta baaskiilada korontada
Taariikhda ： 2021-07-30 Qeybaha ：blog Muuqaalada ： 1,684 aragti
Taariikhda horumarka ee baaskiilada korantada.
An Baaskiilada korantada waxaa loola jeedaa gaari shaqsiyeed oo u isticmaala batteriga ilaha tamarta kaabayaasha ah isla markaana ku qalabeysan matoor, koontaroole, an batariga awooda, Xamili iyo qaybo kale oo ka hawlgala iyo nidaam qalab soo bandhig ku saleysan baaskiil caadi ah.
Taariikhda horumarinta baaskiiladaha korantada ee Shiinaha guud ahaan waxaa looga aqoonsan yahay warshadaha inay yihiin seddex marxaladood oo horumar ah: marxaladda ugu horreysa ee baaskiiladaha korantada, marxaladda soo-saarista baaxadda weyn ee bilowga ah, iyo heerka horumarka xawaaraha ka sarreeya.
Marxaladii wax soo saar ee tijaabada hore Baaskiilada korontada, marka la eego waqtiga, taas oo ah, laga soo bilaabo 1995 ilaa 1999. Marxaladani waxay inta badan tahay in la baaro tiknoolajiyada muhiimka ah ee afarta qaybood ee waaweyn ee baaskiiladaha korontada, mootada, batteriga, xeedho iyo kontoroolha.
Marxaladda ugu horreysa ee wax soosaarka ballaaran:
Iyadoo horumar laga gaadhay teknoolojiyadaha muhiimka ah iyo horumarka joogtada ah ee waxqabadka baaskiilada korantada, baaskiiladaha korontada ku shaqeeya waxay beddeleen mootooyinka iyo baaskiiladaha. Xawaareheeda, ilaalinta deegaanka, sahlanaantiisa iyo raqiisnimadeeda ayaa sidoo kale dhiirrigelisay baahida Suuqa Baaskiilada korontada. Baahida sii kordheysa ee suuqa, shirkadaha horey u soo saaray ee soo saaray ayaa si dhaqso leh ugu kacay, shirkadaha qaar ee cusubna sidoo kale waxay bilaabeen inay galaan. Maalgashigooda baaskiiladaha korontada ku shaqeeya ayaa sidoo kale sii kordhayay, taas oo horseeday in si deg deg ah loo ballaariyo awoodda wax soo saar.
Marxaladda horumarinta xawaaraha ka badan:
Laga soo bilaabo 2005 ilaa hadda, marxaladani waa heerka horumarka xawaaraha ka sarreeya ee Shiinaha Baaskiilada korontada, kaas oo loogu magac daray "marxaladda daadinta" by warshadaha. Inta lagu jiro muddadan, maadaama tartanka ba'an ee ka dhex jira shirkadaha uu si weyn u kiciyey horumarka tikniyoolajiyadda iyo faafitaanka teknoolojiyada cusub, heerka teknoolojiyadda ee dhammaan warshadaha ayaa si aad ah loo hagaajiyey, nolosha batteriga iyo awoodda ayaa kordhay 35%, iyo mootada wuxuu iska beddelay hal burush oo wuxuu u beddelay burush. Mootooyinka Gear-ku waxay u soo baxeen bartamaha guud ee matoorrada waxtarka sare leh ee burush la’aanta ah, iyadoo cimrigooda uu kordhay 5 jeer, waxtarka oo kordhay ku dhowaad 30%, iyo fuulitaanka iyo xamuulka culeyska oo kordhay qiyaastii 3.5 jeer. In kasta oo waxqabadka la hagaajiyay, haddana qiimaha waxsoosaarka ayaa sidoo kale si weyn hoos loogu dhigay, awoodda awoodeeduna hoos ayey u dhacday 21%; nidaamka xakamaynta iyo nidaamka lacag bixinta, heerka farsamada sidoo kale si weyn ayaa loo hagaajiyay.
Haddii aad xiiseyneyso Baaskiilada korontada, waad gali kartaa boggayaga rasmiga ah si aad wax badan uga barato, fadlan si xor ah nala soo xiriir haddii aad su'aal qabtid. www.zhsydz.com.
Ka hor: Hababka dayactirka mootada korontada ee baaskiilka
Next: Kabaabyada isku laabma: ku dar waxoogaa fududayn noloshaada mashquulka ah
BAASKIILADA LOOGU TALAGALO QIIMAHA IYO QIIMAHA
Mootada korontada ma u qalantaa?